အမွှာလည်ကြာသပတေး၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! အမွှာလည်ကြာသပတေး၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
သာနယူးကစားသမား. 30x ကအာမခံလိုအပ်ချက်များကို, max ကိုကူးပြောင်း x4 သက်ဆိုင်. £ 10. အပျငှေ. Slot games only.T က'S AND ကို C'S လျှောက်ထား. $€£5 free bonus is only playable on Shamrock N Roll, မာယာ Marvell နှင့် Candy လဲလှယ်ရေး slot, ကလက်ခံရရှိရန်သင့်မိုဘိုင်းနံပါတ်မှတ်ပုံတင်ပြီးမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြကျေးဇူးပြုပြီး.
ဒီမြှင့်တင်ရေးအသက်ကြီးတရားဝင်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူမှသာရရှိနိုင် 18 သို့မဟုတ်ကျော်.
ဒီမြှင့်တင်ရေးအကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် 00:01 နှင့် 23:59 BST / 1st အပေါ်ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်, 8ကြိမ်မြောက်, 15ကြိမ်မြောက်, 22ကြိမ်မြောက်ဖေဖော်ဝါရီလ.
BST / ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ACST ၏ညီမျှသည် -8.30hrs, PTZ + 8နာရီ
ဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, ကစားသမားများကဒီအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိပြီး€ / $ 20 တစ်နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းကြရပါမည်
တစ်ဆုကြေးငွေ 40 လှည့်ဖျားသင့်အကောင့်မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်.
ဤရွေ့ကားလှည့်ဖျားအမွှာလည် Deluxe အပေါ်€ / $ 0,10 တန်ဖိုးရှိနှင့်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 40 အပိုဆုအတွက်မြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းအတွင်းသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်€ / $ 0,10 အပေါ် spins.
ယင်းလှည့်ခြင်းများကစားသမားကိုသက်ဝင်နိုင်ရန်အတွက်အမွှာလှည့်ဖျား Deluxe ကိုဖွင့်ရမယ်
အလှည့်ခြင်းများကနေရရှိခဲ့ပါတယ်အားလုံးအနိုင်ရရှိဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေအတွက်ဆုခနှင့် 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းဆုကြေးငွေပမာဏကိုသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်.
အပိုဆုရန်ပုံငွေများ 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်သင့်ရဲ့သိုက်နှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုများ၏ပေါင်းလဒ်သယ်ဆောင် (e.g. € / $ 10 သိုက် + € / $ 10 ဆုကြေးငွေ * 30 ရက် = € / $ 600) ဆုကြေးငွေမတိုင်မီတွေ့ဆုံခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်နှင့်ဆုကြေးငွေတစ်သိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောလျှင်မည်သည့်အနိုင်ရရှိတဲ့အဖြစ်သို့ငွေနှင့်ဤနှင့်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဖြစ်လာမဆိုထပ်မံအနိုင်ရရှိတဲ့ကူးပြောင်းနေကြသည်.
ရီးရဲလ်ငွေဂိမ်းအပေါ်လုပ်သာလျှင်စီမံခန့်ခွဲရန်အအာမခံလိုအပ်ချက်ဆီသို့ဦးတည်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်. အခမဲ့ဂိမ်းသည် Play ကိုအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းအာမခံရေတွက်မည်မဟုတ်.
ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေများအတွက်တရားဝင်နေဆဲအသိအမှတ်ပြု 28 နေ့ရကျ. သငျသညျဤကာလအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်မထားသင့်, ကျန်ရှိသောဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများကိုသင့်အကောင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည်.
အပိုဆုရန်ပုံငွေများကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့်အောက်ပါဂိမ်းများကိုအပေါ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း: Dracula, သေနတ် '' N ကို’ နှင်းဆီပန်း, လူးစ Hendrix, ဘုရားသခင့ Fortune မဂ္ဂဇင်း, အဆိုပါမမြင်နိုင်သောက Man, ကျွန်း O'Plenty, Gong Xi Fa Cai, ပိုများသောမျောက်များ, Genie ထီပေါက်, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်, လင်းနို့လူသား, က Superman, အဆိုပါ Flash ကို, Green Lantern, Holly Madison နဲ့ညနေပိုင်း, Psycho, ဂျိမ်းစ်ဒင်း, အဆိုပါဝက် Wizard ကို, Thunderstruck II ကို, Baccarat, Blackjack, ကြောင်, ငရုတ်သီးရွှေ, ဥရောပကစားတဲ့, Sparta ၏အနာဂါတ်ကို, ရှေ, Gorilla Go ကိုတောရိုင်း, hi-အနိမျ့ Blackjack, hi-အနိမျ့ Gambler, ချိတ်သူရဲကောင်း, ထီပေါက် Jester တောရိုင်းအလုပ်မလုပ်, JJ50K, တိုက်ရိုက် Baccarat, တိုက်ရိုက် Blackjack, ကစားတဲ့ Live, ကံကောင်းလာရီ Lobstermania, Megajackpots အမွှာ Deluxe လှည့်ဖျား, Megajackpots Siberian မုန်တိုင်း, Megajackpots စတား Lantern, Megajackpots Wolf က Run ကို, နဂါးနိုင်ပွဲများ, Motorhead, အမေရိကန်ကစားတဲ့, Blackjack Classic, အိုအေစစ် Poker, ဆိပ်ခံ, တက္ကဆက်ပြည်နယ် Holdem, Fury ၏ယက်, အဆိုပါဝံ၏ဂြိုဟ်, Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, slots-o-ရွှေ, လှည့်ဖျားစုန်း, Starmania, မျှော်စင် Steam, စူပါစိန် Deluxe, စူပါတိုးတက်မှုနှုန်း, ထိပ်တန်းကြောင်, အဆုံးစွန် X ကိုငါးခု Poker Play, Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ဗိုက်ကင်း, Winstar, Wolfpack, worms နဲ့ Harley Davison Freedom ကိုလှည့်လည်
4x ကကူးပြောင်းခြင်း: ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေကနေအများဆုံးကူးပြောင်းငွေပမာဏ 4X မှာချီးမြှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုမိနစ်မှာပါလိမ့်မည်. အာမခံပြီးပြည့်စုံသည်တစ်ချိန်ကအပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုအလိုအလျှောက်ပြောင်း.
တစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစ်ကြိမ်တက်ကြွစေနိုင်သည်. သငျသညျပြီးသားရှိပြီးသား Active ကိုဆုကြေးငွေချိန်ခွင်လျှာရှိပါက, ဒီဆုကြေးငွေကိုသင့်ဆိုင်းငံ့ဆုကြေးငွေတန်းစီထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်. သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “”ငါ၏အပရိုဖိုင်းကို”” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆုကြေးငွေတန်းစီကြည့်ရှုရန်အပိုင်း.
ထိုအာမခံမီကရန်ပုံငွေဆုတ်ခွာပြီးပြည့်စုံသည်အကောင့်အားလုံးကိုဆုကြေးငွေနှင့်ဤ attribute ရဲ့ဆိုအနိုင်ရရှိကိုပယ်လိမ့်မည်.
ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးမဆိုအသုံးအနှုန်းချိုးဖောက်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ဖောက်သည်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားဖြင့်နေရာချကစားနည်းတစ်ခုစီးရီး၏မည်သည့်သက်သေအထောက်အထားရှိ၏ဘယ်မှာ, တစ်သိုက်ဆုကြေးငွေကြောင့်အရာ, တိုးမြှင့်ပေးချေမှုများကို, အခမဲ့ကစားနည်းသို့မဟုတ်အာမခံချက်ဖောက်သည်အမြတ်အစွန်းအတွက်မဆိုအခြားပရိုမိုးရှင်းကမ်းလှမ်းမှုကိုရလဒ်များကိုမသက်ဆိုင်ဘဲမူလရလဒ်ကို၏, တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရှိမရှိ, စီမံခန့်ခွဲမှုကဲ့သို့သောကစားနည်းများ၏ဆုကြေးငွေဒြပ်စင်ပြန်ဖြစ်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်. ကျနော်တို့နောက်ထပ်ဖောက်သည်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာအဖြစ်ငါတို့လုံးဝဆုံးဖြတ်ပါသည်အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ရန်အတွက်လုံလောက်သောစာရွက်စာတမ်းများများကိုမဆိုဖောက်သည်မေးရန်လက်ျာကြိုတင်ယူထားမည်သည့်ဆုကြေးငွေ crediting ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုတင်, သူတို့ရဲ့အကောင့်အခမဲ့အလောင်းအစားသို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုကို.
စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, မဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ (သိ. သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို) မည်သည့်အချိန်တွင်နှင့်ကြိုတင်သတိပေးချက်မပါဘဲ
စီမံခန့်ခွဲမှုပထမဦးဆုံးအမည်များကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ရှိသည်, နောက်ဆုံးအမည်များ၏ကနဦး, အမည်ဝှက်နှင့် / သို့မဟုတ်မဆိုမြှင့်တင်ရေးကြေညာချက်ထဲမှာနေထိုင်ရာနိုင်ငံသို့မဟုတ်မြို့, မဆိုပရိုမိုးရှင်းဆုကြေးငွေများနှင့်အခြားစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများတွင်လက်ခံသူများ, အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်ရှိမရှိ.
န်ထမ်း, Nektan Plc ၏အရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများ, ယင်း၏မြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ်အခြားအေဂျင်စီများ, လိုင်စင်ရှိနှင့်လိုင်စင်ခွင့်ပြု, ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အခြားဆက်စပ်နေသောသို့မဟုတ်ဆက်နွယ်ကုမ္ပဏီများမြှင့်တင်ရေးအတွက်အကျုံးမဖြစ်ရကြလိမ့်မည်. တူညီသောဝေါဟာရများထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏တိုက်ရိုက်မိသားစုများလျှောက်ထားရမည်.
စံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခွအေန လျှောက်ထား.
နှစ်သစ်ကူး Mega DROP SPINS များအတွက်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
ဖုန်းဘီလ်အားဖြင့်မိုဘိုင်းကာစီနို Deposit | slots ဖုန်းဘီလ်အားဖြင့်ငွေပေးချေ
အခမဲ့£ $ €5Deposit ကာစီနို
Slotfruity.com Nektan စွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ် (ဂျီဘရောလ်) ဂျီဘရောလ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကန့်သတ်ထား. Nektan အဆိုပါလောင်းကစားကော်မရှင်အားဖြင့်လိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် (နံပါတ် 000-039107-R-319400-013) ဂရိတ်ဗြိတိန်မှာဖောက်သည်များအဘို့နှင့်ဂျီဘရောလ်အစိုးရကလိုင်စင်နှင့်ဂျီဘရောလ်လောင်းကစားကော်မရှင်အားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် (အဘယ်သူမျှမ RGL.054) ရှိသမျှသည်အခြားသောဖောက်သည်များအတွက်. ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု: +44(0)203 457 3251 / slotfruity.support@nektan.com
Copyright ©2018, slot Fruity. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး